Uvimba woovimba bolwazi-Ilungelo laseMelika lokwazi
U-Bayer uthe uza kuphinda ahlawule isivumelwano se-Roundup njengoko intsholongwane ivala izindlu zenkundla
ezaposwa ngomhla Aprili 3, 2020 by UCarey Gillam
I-Bayer AG ibuyela umva kwiindawo ekuxoxiswene ngazo kunye neefemu zomthetho ezininzi zase-US ezimele amawaka abamangali abathi babhencwa kwi-Mousanto's Roundup herbicides kubangele ukuba baphuhlise i-non-Hodgkin lymphoma, imithombo ebandakanyekayo kwityala lithe ngoLwesihlanu.
Ukuguqulwa kuza njengoko iinkundla zase-US zivaliwe eluntwini ngenxa yokusasazeka kwe-coronavirus, ishenxisa ukubonwa kolunye uvavanyo lomhlaza we-Roundup kungekudala.
I-Bayer, eyathenga iMonsanto ngoJuni ka-2018, ibikhe yathethathethana ngokusombulula isithuba esingangonyaka, ifuna ukuphelisa isimangalo esixhokonxe isitokhwe senkampani, sikhuthaza ukungavisisani kwabatyali-mali, kwaye siqhuba nokuziphatha okuthandabuzekayo eluntwini. ukujonga. Izilingo ezintathu zokuqala zakhokelela kwilahleko ezintathu zeBayer kunye namabhaso amajaji ngaphezulu kwe- $ 2 yezigidigidi, nangona iijaji zetyala kamva zanciphisa amabhaso.
Bayer yenziwe ingxelo kawonke-wonke kule veki kusithiwa iintetho zokuhlala zacothiswa ngubhubhane we-coronavirus, kodwa amagqwetha aliqela athi ayiyonyani leyo.
Ngokwamagqwetha abamangali, iBayer ibibuyele kumafemu ezomthetho ebesele egqibile uthethathethwano ngeendawo zokuhlala ezithile kubathengi babo, besithi inkampani ayizukuzihlonipha izixa ekuvunyelwene ngaso.
"Uninzi lwamagqwetha kwilizwe liphela babecinga ukuba banento yokwenza," utshilo igqwetha laseVirginia uMike Miller, inkampani yakhe emele abathengi abangama-6,000 kwaye waphumelela izilingo ezimbini zeRoundup ukuza kuthi ga ngoku. I-Bayer ngoku ifuna "ukusikwa kweenwele" kwezi zivumelwano, utshilo uMiller.
Nokuba ngaba iifemu ezahlukeneyo ziya kuthatha izibonelelo ezincitshisiweyo zihlala zibonwa. "La ngamaxesha onqabileyo ezoqoqosho," utshilo uMiller. "Abantu kufuneka bacinge ngeyona nto ilungele abathengi babo."
Ukuphendula isicelo sokwenza izimvo, isithethi seBayer sinike le ngxelo ilandelayo: "Senze inkqubela kwiingxoxo zokulamla iRoundup, kodwa amandla e-COVID-19, kubandakanya nezithintelo ezibekwe kwezi veki zidlulileyo, zibangele ukurhoxiswa kweentlanganiso kwaye zilibazisile le nkqubo. … Ngenxa yoko, inkqubo yolamlo icothe kakhulu, kwaye ngokwenyani, silindele ukuba oku kuya kuqhubeka kunjalo kwixesha elizayo. Ngeli xesha, sizakuqhubeka nokwenza konke esinako ukunceda ukulwa ubhubhane we-COVID-19 jikelele, ngokuhambelana nombono wethu 'wezempilo kubo bonke, ukulambela mntu.' Asinakho ukuthelekelela malunga neziphumo ezinokubakho kuthethathethwano okanye ixesha, ngokujonga ukungaqiniseki okujikeleze ubhubhane kunye nokugcinwa okuyimfihlo kwale nkqubo, kodwa sizimisele ekubandakanyeni ulamlo ngokuthembekileyo. ”
Ilungelo lase-US lokwazi uxelwe ekuqaleni kukaJanuwari ukuba amaqela ebesebenza kwisivumelwano esikwi- $ 8 yezigidigidi ukuya kwi-10 yezigidigidi zeedola. U-Bayer uvumile ukuba bajongane namabango angaphezulu kwe-40,000 yabamangali, kodwa amagqwetha abamangali athe inani elipheleleyo lamabango liphezulu kakhulu.
Phakathi kweefemu ebezithethathethane ngeendawo zokuhlala kubaxumi bazo kukho inkampani yeAndrus Wagstaff esuka eDenver, eColorado nakwifemu yaseLos Angeles yaseBaum Hedlund Aristei & Goldman. Zombini zafikelela kwizivumelwano kunyaka ophelileyo neBayer.
Ukongeza, inkampani ye-Weitz kunye neLuxenberg evela eNew York kunye nekaMike Miller ngokuqinile bafikelele koko babecinga ukuba zizivumelwano ngokwemiqathango. Ifemu nganye imele amawaka abamangali.
Amagqwetha abamangaleli aphambili ayesebenzisa kuthethathethwano lokuhlala yayisisongelo solunye ityala loluntu. Kwizilingo ezintathu zokuqala, ukugwetywa Amaxwebhu angaphakathi eMonsanto babonisa ubungqina bokuba inkampani iyabazi ubungozi bomhlaza kwimichiza yokubulala ukhula eglyphosate kodwa isilele ukulumkisa abathengi; babhala ghost amaphepha enzululwazi evakalisa ukhuseleko lwamayeza okubulala ukhula; basebenze namagosa athile olawulo ukuphelisa uphononongo lukarhulumente lwe-glyphosate toxicity; kunye neenzame zobunjineli zokujongela phantsi abagxeki.
Ukutyhilwa kuye kwabangela ingqumbo kwihlabathi liphela kwaye kwanyanzeleka ukuba kuthintelwe i-glyphosate-based herbicides.
Izilingo ezininzi ebezizakubanjwa kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo zarhoxiswa kwakamsinya nje phambi kokuba zicwangciselwe ukuqala xa iBayer ivumayo ukuhlala kwabantu abathile kwabo balingo. Amabini ala matyala abandakanya abantwana ababethwe yi-non-Hodgkin lymphoma kwaye owesithathu waziswa ngumfazi ophethwe yi-non-Hodgkin lymphoma. Abo bamangali, kunye nabanye abavumelene nokuhlaliswa endaweni yezilingo kwiinyanga ezidlulileyo, bakhuselwe kwaye abayonxalenye yomzamo wokubuyela umva ngoku yiBayer, ngokwemithombo emininzi ebandakanyekayo.
I-Bayer icwangciselwe ukubamba intlanganiso yabanini zabelo yonyaka ngo-Epreli 28. Ngethuba lokuqala kwimbali yenkampani, intlanganiso iya kuba ibanjwe ngokupheleleyo kwi-intanethi.
Abamangali abathathu bokuqala ukuphumelela amabhaso amajaji ngokuchasene neMonsanto kusafuneka bafumane nayiphina imali njengoko iBayer ibhengeza isigwebo.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, umhlaza, inkundla, EPA, glyphosate, herbicides, ulwaphulo, IMonsanto, inambuzane, Yisonge yonke, inzululwazi, zilingo
Umhlaza Ukuthatha irhafu Njengezilingo ezintsha zeRoundup kufutshane
ezaposwa ngomhla Novemba 13, 2019 by UCarey Gillam
Kule minyaka mihlanu idlulileyo, uChris Stevick uncede unkosikazi wakhe u-Elaine kwidabi lakhe lokulwa uhlobo lomhlaza olukhohlakeleyo olukholelwa sisibini ukuba lubangelwe kukusetyenziswa okuphindaphindiweyo kuka-Elaine kweMonsanto's Roundup herbicide ejikeleze ipropathi yaseCalifornia esi sibini sasinaso. Ngoku iindima zibuyisiwe njengoko uElaine kufuneka ancede uChris ajongane nomhlaza wakhe.
UChris Stevick, owayehlala exuba i-Roundup yomfazi wakhe kwaye avavanye isitshizi esasisebenzisa ukuhambisa umbulali wokhula, wafunyanwa kwinyanga ephelileyo ene-lymphocytic leukemia (CLL), uhlobo lwe-non-Hodgkin lymphoma. Ngokungafaniyo nohlobo luka-Elaine olunobundlongondlongo lwe-NHL eyaziwa ngokuba yi-central system ye-lymphoma, umhlaza kaChris luhlobo oluthanda ukukhula kancinci. Wafunyaniswa emva kovavanyo lomzimba lubonisa ukungaqheleki egazini lakhe kwaye wakhuthaza olunye uvavanyo.
Ukuchongwa kwesifo kuye kwabangela ukungavisisani phakathi kwamagqwetha abandakanyekayo kwimveliso ye-Roundup yematyala enetyala enikwa ukuba ityala likaStevick ngokuchasene neMonsanto lisetwe njengelilandelayo ityala lokuya enkundleni.
Ngomhla wokuvavanywa kukaFebruwari 24, 2020, amagqwetha kaElaine Stevick wabuza amagqwetha kaMonsanto ukuba inkampani ingavuma ukuba amabango omhlaza kaChris Stevick angadityaniswa nenkosikazi yakhe kwityala likaFebruwari eSan Francisco. Amagqwetha athi ubuncinci bokuchongwa kukaChris Stevick bubungqina obamkelekileyo kwityala lomkakhe njengobungqina obongezelelekileyo bebango labo lokuba ukubonakaliswa kweRoundup kunokubangela ukuba ingeyo-Hodgkin lymphoma.
Amagqwetha kaMonsanto aphikisa ukudityaniswa kwamabango kwaye athi ityala lika-Elaine Stevick kufuneka liqhubeke kuphela ngoFebruwari ukuba akukho nto ikhankanyiweyo ngomhlaza womyeni wakhe. Ngenye indlela, iMonsanto icela ukuba ityala likaFebruwari lilibaziseke kwaye inkampani inikwe ixesha lokufumanisa isifo sikaChris Stevick.
Umcimbi kufuneka uxoxwe kwinkomfa yolawulo lwamatyala ngoLwesine, nesicwangciso sikaSevicks sokuzimasa. Umgwebi weSithili sase-US uVince Chhabria uthe phambi kwetyala ukuba "ngokujonga ngokokujonga" ukuba ukuqhubeka kwetyala kuya kufuneka ukuba isibini sifuna ukuzama amabango kunye. Ukwathe ukuba u-Elaine Stevick uyaqhubeka nezimangalo zakhe, ubungqina bokuba umyeni wakhe unesifo somhlaza “ngekhe bamkelwe….”
Ukuba ijaji iyakuqinisekisa ukuba ukujoyina amabango ngenene kuya kufuna ukuqhubeka, u-Elaine Stevick uyakukhetha ukuqhubeka yedwa ngoFebruwari, latsho igqwetha uMike Miller.
Kwasekuqaleni konyaka omnye umyeni nenkosikazi abaphethwe ngumhlaza, uAlva noAlberta Pilliod, bawongwa ngaphezulu kwe- $ 2 yezigidigidi kumonakalo Kwityala labo ngokuchasene neMonsanto, nangona ijaji kwityala lehlise umvuzo we-$ 87 yezigidi. Ityala likaPilliod yayililinge lesithathu lemveliso yoxanduva lwe-Roundup ukuba lwenzeke kwaye okwesithathu apho iijaji zafumanisa ukuba i-Monsanto's Roundup herbicides ibangela i-non-Hodgkin lymphoma kwaye inkampani ibufihlile ubungozi kubathengi. Umhlaza wase-Alberta Pilliod usandula ukubuya kwaye akucaci ukuba uzakuphila ixesha elide, ngokutsho kwamagqwetha akhe.
Akukho namnye wabantu ukuza kuthi ga ngoku abanikezele ngemali kwezi zilingo zintathu abafumene nayiphi na intlawulo evela eMonsanto njengoko umnini wayo uBayer AG ebhengeza izigqibo.
Okwangoku bangaphezulu kwama-42,000 abantu abamangalela iMonsanto eMelika, betyhola ukuba iMonsanto's herbicides ibangela ukuba ingeyo-Hodgkin lymphoma. Izityholo zongeza ukuba inkampani ibizazi kakuhle iingozi kodwa khange yenze nto ukulumkisa abathengi, endaweni yoko basebenzise irekhodi lenzululwazi.
Ityala likaStevick linye kuphela kweendawo ezintandathu kwiindawo ezintlanu ezibekelwe uJanuwari noFebruwari, nganye nganye kulindeleke ukuba ihlale iiveki ezininzi. Amagqwetha amaninzi ayabandakanyeka ngaphezulu kwetyala elinye, kwaye onke anamangqina aziingcali, ebeka imiceli mngeni kwimibutho nakwizixhobo kumacala omabini. Izilingo ezininzi ebezicwangciselwe oku kuwa zilibazisekile kude kube ngunyaka olandelayo.
Okwangoku, omabini amacala esimangalo agcina iso kwiNkundla Yezibheno yaseCalifornia, apho amagqwetha ommangali UDewayne "Lee" Johnson kwaye amagqwetha eMonsanto alinde umhla weengxoxo zomlomo kwizibheno zabo zomnqamlezo. I-Monsanto ifuna ukuguqula isigqibo esivumelanayo senkundla ngokuchasene nenkampani ngo-Agasti 2018. Ijaji yetyala kwelo tyala yehlisa ibhaso lejaji ukusuka kwi- $ 289 yezigidi ukuya kwi-78 yezigidi zeedola kwaye uJohnson ubongoza ukuba kubuyiselwe imali eyi- $ 289 yezigidi.
UJohnson waba ngowokuqala ukuya kulingo ngokuchasene noMonsanto kwaye ukuphumelela kwakhe kwathumela amaxabiso ezabelo eBayer ukuhla kakhulu kwiinyanga nje ezimbini emva kokuba iBayer ivalile ukuthengwa kweMonsanto ngoJuni 2018. UJohnson wanikwa "ukuthanda ityala" ngenxa yoqikelelo loogqirha bakhe ukuba akazange yide uphile. UJohnson uludlulile olo qikelelo, nangona impilo yakhe iqhubeka ukwehla.
Njengokuqhubeka kwesimangalo, abamangali abaliqela babhubhile okanye basondela ekufeni, okanye bafumana ubunzima kwezempilo kangangokuba amandla abo okufumana ubunzima bokufakwa kwemali kunye novavanyo luye lwancipha.
Ngamanye amaxesha, amalungu osapho athatyathelwa indawo njengabamangali babantu abaswelekileyo. Ngokwentetho yezomthetho, izaziso eziya kwiinkundla zithi "Ingcebiso ngokufa. "
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, umhlaza, inkundla, ukutya, glyphosate, impilo, ulwaphulo, IMonsanto, inambuzane, Yisonge yonke, inzululwazi, trial